LUUQADDA IYO WAX -AQRINTA WAA MASUULIYAD NAGA WADA DHEXAYSA WARGELIN KU JEEDA WAALIDIINTA ISKOOL BILAABIDA - PDF
Download "LUUQADDA IYO WAX -AQRINTA WAA MASUULIYAD NAGA WADA DHEXAYSA WARGELIN KU JEEDA WAALIDIINTA ISKOOL BILAABIDA"
1 LUUQADDA IYO WAX -AQRINTA WAA MASUULIYAD NAGA WADA DHEXAYSA WARGELIN KU JEEDA WAALIDIINTA ISKOOL BILAABIDA
2 LUUQADA IYO HORUMARKA WAX AQRINTU WAA WAX AAN KALA HARIN
3 LUUQADDA IYO WAX -AQRINTA WAA MASUULIYAD NAGA WADA DHEXAYSA 3 Ma ogtahay in Si fiican afka ugu hadlidu ay aasaas fiican u tahay, in cunugaagu wax barto. Cunuga ku fiican luuqadda waxaa usahlan ka qayb qaadashada cayaarta iyo xalinta isqabashada. Ku hadlidda afka iyo horumarka wax aqrintu waa wax uu xiriir dhow iyo toosanba ka dhexeeyo. Wax kasta oo la qoraahi waxay gacan ka gaysanaayaan wax aqrinta ama is xoojiyaan labadooduba. Cunugaaga waa la tijaabinaaya af aqoontiisa biloowga iskoolka, si markaas wax baristiisa loogu jaan gooyo qaabka uu wax ku baran karo. Ujeedada inla gaaro la rabo ayaa ah, in cunugaagu wax aqrin karo ama fahmi karo far qoran, ahna mid ku cabiran da da uu iskoolka ka joogo, dhamaadka fasalka 2aad.
4 4 LUUQADDA IYO WAX -AQRINTA WAA MASUULIYAD NAGA WADA DHEXAYSA Kaalintaada adiga ka waalid ahaan Iskoolka ayaa laga raabaa, inay cunugaaga baraan wax aqrinta iyo wax qorista, laakiin ka waalid ahaan waxaa masuuliyadi kaa saaran tahay, inaad cunugaaga ku dhiiri geliso barashada afka iyo horumarkiisa wax aqrineed. Baalasha soo socda waxaad ka dheehan doontaa, sidii aad cunugaaga ugu dhiiri gelin lahayd barashada wax aqrinta iyo qorista. Wax su aala ma qabtaa ama maka walwalsan tahay cunugaaga luqadiisa ama horumarkiisa wax aqrineed. Waxaad marwalba talo iyo dariiq tusidba ka heli kartaa macalimiinta ama barbaarisooyinka.
5 LUUQADDA IYO WAX -AQRINTA WAA MASUULIYAD NAGA WADA DHEXAYSA 5 La sheekayso cunugaaga Luqadda cunugaaga waxay ku horumartaa adiga iyo cunugaaga oo wada sheekaysta. Wada sheekaysi fiican oo idin dhexmaraahi wuxuu balaariyaa ama badiyaa tirada ereyada cunugu yaqaan. Markii cunugaagu rabo inoow barto wax aqrin iyo fahmo nuxurka qoraalka, markaas tiro badnaanta ereyada uu yaqaan waa muhiin oo waxbay utaraayaan. Kala sheekayso cunugaaga wixii aad maanta soo aragteen. Su aalo waydii, dhegayso cunugaaga, una sii kuur gal. Ka jawaab su aalaha cunugaagu ku weeydiiyo. Uga sheekee waxa aad aqrinaysid, filinka ka daawanaysid amaba aad ku mashquulsan tahay. La cayaar, la hees jiib iyo jaanba. Ku day cunugaaga bal inoow kaaga sheekeeyo waxa uu masawiray. Kula sheekayso cunugaaga afka adiga markaas kuu sahlan eed ku fiican tahay.
6 6 LUUQADDA IYO WAX -AQRINTA WAA MASUULIYAD NAGA WADA DHEXAYSA Muuji inaad wax la qorayso Danaynta uu cunugaagu danaynaayo xarfaha waa mid macno wayn uyeelan doonta, waa dambe markuu bilaabo barashada wax qorista iyo wax aqrinta. Sida oo doono cunugaaga wax ha u qoree, wax saxa ama wax iska daba jeed jeedaba, waa muhiim inaad si kashka iyo laabta ugala qayb qaadato. Cunugaagu wuxuu cagta saaray dhabihii oow ku gaari lahaa waaya aragnimo uu uyeesho xarfaha iyo oraahaha, iyo wixii loo isticmaali karo. U suurta geli cunugaaga inuu wax masawiro, waxna qoro. Adiga iyo cunugaaga warqad, boostokaar ama sheeko gaaban isla qora. Isla qora warqada adeega iyo mid uu wax ku jimanaayo (codsanaayo). Ku kaalmee cunugaaga sidii uu fariimo ama hadal gaaban ugu dhex qori lahaa wixii uu masawiray. Kombiyuutarka wax ku qora. Tus cunugaaga markaad adiga laftirkaaga wax qorayso. Usheeg cunugaaga in xarafku leeyahay magac (fx M) iyo dhawaaqba(mmm).
7 LUUQADDA IYO WAX -AQRINTA WAA MASUULIYAD NAGA WADA DHEXAYSA 7 Cunugaaga wax u aqri Ilmaha badankood waa jecel yihiin in kor wax loogu aqriyo. Waaya aragnimo fiican oo cunugaagu uyeesho buugaagta, waxay siinaysaa rabitaanka ah, inoow barto wax aqrinta. Marka aad kor wax ugu aqrinayso cunugaaga, aadna ka wada hadashiin nuxurka waxa aad u aqrinayso, markaas waxaad ka qayb qaadanaysaa badinta ereyada luuqada ee uu yaqaan. Cunugu wuxuu baranaayaa ereyo badan iyo inuu ogaal uyeesho luuqadda qoran. Tanina waa aasaas muhiim u ah sidii uu gadaal dambe u baran lahaa wax aqrinta. Ku dadaal in goobta wax ku wada aqrinaysiin ay degan tahay. Isla fiirfiiriya buuga, markaad aqrinaysiin. Usheeg buuga ciwaankiisa iyo masawiradaba, intaadan buuga guda gelin. Uga sheekee nuxurka buuga, markaad aqrinaysid (lacala maxaa hadda dhacaaya?). U sharax erayga uusan cunugu aqoon. Su aalo kasoo jeedi nuxurka buuga, kana jawaab cunugaaga su aalihiisa. Buuga aad dooranayso aqrintiisu, waa inuu ahaada mid cunugu danaynaayo. Dooro buug aad adiguba taqaan iyo kuwa cusubba. Waxba ma dhibaayo xataa hadii aad hal buug ku celceliso. Wax badan u aqri.
8 8 LUUQADDA IYO WAX -AQRINTA WAA MASUULIYAD NAGA WADA DHEXAYSA U ogoloow cunugaaga inoow wax kuu aqriyo Cunugaagu wuxuu bilaabay barashada wax aqrinta. Markastana wuxuu sii yeelanaayaa waayo aragnimada wax qorista, Tusaale markii uu aqoonsado eray meel ku qoran ama kaartoon. Cunugaagu wuxuu aqoonsanaayaa erayga biloowgiisa. Tartiib tartiib wuxuu isku dayaayaa inuu eray cusub barto, isagoo higaadinaaya biloowga inta dhimanna qiyaas ku kaamilaaya. Barashada wax aqrintu waxay qaadanee waqti iyo iskalifid. Isku day inaad uhesho waqti iyo jawi aad cunugaaga wax kula aqriso maalin kasta. Buuga isla dul mara, kalana sheekayso masawirada, ka hor inta inta uusan cunugaagu bilaabin wax aqrinta. U suurta geli inoow kor kuugu aqriyo, adna ka dhegaysato. Hadii cunugaaga aqrinta eray ku adkaado udhamaystir adigu. Haka kala goyn, hadii uu qalad aqriyo, kaliya hadii uu sameeyo qalad wixii fahamkiisa ku dheelaaya, sax markaas. Ka wada hadla nuxurka qoraalka. Dooro buugaagta ku cabiran cunugaaga heerkiisa. Cunugaaga waa inuu aqrin karo erayada badakood kaligiis.
9 LUUQADDA IYO WAX -AQRINTA WAA MASUULIYAD NAGA WADA DHEXAYSA 9 Weli xasuusnoow Cunugaaga ku hadalka luuqada iyo awoodiisa wax aqrinta waxay muhiim utahay sida iskaga filaan lahaa xagga maadooyinka iskoolka iyo noloshiisa mustaqbalka. Xasuusnoow in amaanta iyo dhiirigelintuba ay tiirar muhiima uyihiin rabitaanak cunugaagu rabo wax aqrinta. Wada shaqayn fiican oo ka dhexaysa iskoolka iyo waalidka waxay macno wayn uleedahay cunugaaga horumarka uu ka samaynaayo xaga luuqada iyo wax aqrinta.
10 10 LUUQADDA IYO WAX -AQRINTA WAA MASUULIYAD NAGA WADA DHEXAYSA Wargelin Cunugaaga wuxuu cayaar luuqadeed iyo kobcin wax aqrineedba ka heli karaa bogga internet-ka hoos ku qoran: Waxaad kalood wax kugu dhiirigeliya inaad wax u aqriso cunugaa-ga ka heli kartaa: Adiga laftirkaaga ma kugu adag tahay wax aqrintu, waxaad kaalmo ka heli kartaa:
11 LUUQADDA IYO WAX -AQRINTA WAA MASUULIYAD NAGA WADA DHEXAYSA 11 Denne pjece er oversat til engelsk, polsk, somali, arabisk, tyrkisk, vietnamesisk, kurdisk, dari og pashto. Oversættelserne findes på følgende hjemmeside: This leaflet has been translated into English. The translation can be found on the following: Ta broszura jest przetlumaczona na jezyk polski. Przetlumaczony tekst znajduje sie na stronie internetowej: Qoraalkan waxaa lagu turjumay af soomaali. Turjumidda waxaad ka heli kartaa boggaan: ı انګريزي پولنډي سومالي عربي ترکې کوردي اوويټنامي دري پښتو معلوماتې کتابچه په مختلفوژبو دغه : شی په لاندې ويبپاڼه کې ومومۍ کولای تاسويي. شوی ده ژباړل
12 Waxaa soo saaray: Pædagogisk Afdeling Børn og Unge Aarhus Kommune Waxaa la soo saaray: Juni 2011 soo saaridii 2aad - daabacadda1aad Xuquuqda daabacaada: Pædagogisk Afdeling Børn og Unge Aarhus Kommune Qaabka daabacaada: Qaybta war isgaarsiinta Børn og Unge Aarhus Kommune Soo rogidda: Aarhus Kommunes Kopicenter
DEMOKRATISPEJDERNE FV15. Om at gøre demokrati ultranærværende for borgere i områder med lav valgdeltagelse.
DEMOKRATISPEJDERNE FV15 Om at gøre demokrati ultranærværende for borgere i områder med lav valgdeltagelse Evalueringsrapport 3 juli 2015 Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen INDHOLD Forord
P Œ.. Ê²,.. ŠÊ²,.. ŠÊ² ±μ,.. Œ ² Ìμ, Š.. ŒÊÌ. Š Œ ˆ ˆ ˆŠ Š ˆ ƒ ƒ Œ ˆ Ÿ Š ˆ -2Œ
P13-2008-179 Œ.. Ê²,.. ŠÊ²,.. ŠÊ² ±μ,.. Œ ² Ìμ, Š.. ŒÊÌ ˆ ˆ Š Š Œ ˆ ˆ ˆŠ Š ˆ ƒ ƒ Œ ˆ Ÿ Š ˆ -2Œ Ê² Œ... P13-2008-179 ² É ²μ Éμ±μ ± É Ê μ μ μ Ê ³ É ² μ ÒÌ Ï ±μ ± μ μ μ ³ ² É ²Ö ±Éμ ˆ -2Œ ÉμÖÐ ³Ö μ Éμ É μ